Imibuzo evame ukubuzwa - Foshan Chengpai Sanitary Ware Co., Ltd. '
Q: Likuphi ichweba lokuthumela?
A: Ukuthumela kwethu port ngokuvamile Foshan Port, Guanghzou Port futhi Shenzhen Port.
A: Ikhanda leshawa lihlala isikhathi esingakanani?
B: Ikhanda leshawa lihlanzeke kangakanani nokuthi luhlobo luni lwamanzi olusezindlini yizinto ezimbili ezinquma ukuthi isikhathi esingakanani ngaphambi kokuba ikhanda leshawa kufanele lithathelwe indawo. Ikhanda leshawa kufanele lihlanzwe kanye ngesonto futhi lizodinga ukushintshwa uma kukhona ukuvinjelwa, isikhunta, noma i-slime engaqhamuki ngemuva kokuhlanzwa. Kukhona ezinye izincomo zokushintsha ikhanda leshawa njalo ngonyaka, kuyilapho abanye bethi ukufaka esikhundleni ngemuva kwezinyanga eziyisithupha ukuze amabhaktheriya angakhi futhi alimaze umsebenzisi. ikhanda leshawa ngaphandle kwe-LED liyiminyaka EMIHLANU.
Q: Kungenzeka yini ukuthi ama-functon amabili asebenze ngasikhathi sinye?
A: Kuya ngemodeli oyithengayo. Izinhlobo eziningi zine-divers valve eyodwa lapho ukhetha khona umsebenzi owodwa ngasikhathi. Kodwa-ke amanye amamodeli afakwa ngamaphambukisi amabili akuvumela ukuthi usebenze imisebenzi emibili ngasikhathi sinye.
Q: Ikhanda lami lokugeza liyiphethini yesifutho esilahlekile. Yini okufanele ngiyenze?
A: Uma uthola iphethini yokufafaza engajwayelekile noma indiza yokufafaza amanzi nge-engeli engajwayelekile, njenge-90 degree noma ukufafaza eceleni, imvamisa kubangelwa imbobo yokufafaza evinjiwe noma evinjiwe kancane.
Q: Yini okufanele ngiyinake ngenkathi ngifaka ikhanda elisha leshawa?
A: Yebo, unga-oda noma yikuphi ubuningi futhi singalayisha isitsha njengomyalo wakho.
Q: Yibuphi usayizi wepayipi engiwudingayo ekhanda le-Shower, ½ '' noma ¾ ''?
A: Ikhanda leshawa laseChengpai lisethelwe lines '' imigqa yokuphakelwa. Uma unezintambo ezi-¾ '' zokuhambisa ungazinciphisa endaweni eneziqu ziye ku-½ ''.
Q: Singasenza isiqukathi sokuhlanganisa?
Q: Ngingasithola kanjani Led Shower Head isampula?
A: Sicela uxhumane nathi futhi wazise ngento oyidingayo.
Sizokwenza i-PI ngenkokhelo yakho. Ngemuva kokutholwa kwenkokhelo, sizoyiletha kuwe.
Q: Iyini Inhloko Yokugeza Imvula?
A: Inhloko yeshawa yemvula yenza ukuphuma kwamanzi kufane nemvula. Zonke izinhlobo zeshawa zaseChengpai zivumela umsebenzisi ukuthi alungise ukugeleza kwamanzi ukuze kube luhlobo lwemvula olubahlelayo. Lawa makhanda eshawa ngokuvamile abukeka njengediski enezimbobo zenjoloba kuzo.
Q: Injani iphethini yesifutho semvula?
IMP: Kungumthelela opholile kakhulu, ukuthola isifutho esigxile kakhulu abantu abaningi bashintshela eshaweni, inketho enhle yokuba nayo.
Q: Kungenzeka yini ukuthi ube neshawa esinqunyiwe ngaphezulu nge-Chengpai bar mixer shower?
A: Yebo, kunezinhlobonhlobo zamashawa e-Chengpai bar mixer atholakala ngezesekeli zekhanda ezingaguquki kufaka phakathi i-bar mixer.
Q: Ngidinga isitimela sokubamba?
A: Ikhodi yokwakha yendawo ingadinga ujantshi wokubamba. Lesi isengezo esingeziwe esifakwe ezansi kokuthunyelwe, okuhloselwe ukuhlinzeka ukuqonda okulula kwalabo abakhuphuka behla izitebhisi. Uma iphrojekthi yakho ifaka izitebhisi, kubalulekile ukubheka ukuthi kudingeka yini ukubamba ujantshi endaweni yangakini.
Q: Yini engidinga ukuyibheka kakhulu lapho ukhetha futhi ufake ishawa yokuxuba efihliwe?
IMP: Bheka ukuthi isakhiwo sodonga siyakwazi ukwamukela ukuhanjiswa kwamapayipi amanzi kanye nesakhiwo ngokujula komxube okhethiwe. Qiniseka ukuthi izimpahla ezishisayo nezibandayo zifaka okufakwayo okulungile kwisixubuzi ngaphambi kokwenza udonga lube luhle. Qinisekisa ukuthi lapho ufaka ukhonkolo noma uthayela ezungeze ishawa yokuxuba ehlunga futhi ihlole ama-valve iyatholakala ukuze isetshenziswe ngokuzayo
Q: Ingabe inkampani noma inkampani yokuhweba?
A: Singumkhiqizi. Kwemboni yethu itholakala Foshan idolobha, eduze Guangzhou idolobha kanye Shenzhen idolobha. Wamukelekile ukusivakashela.
Q: Kuyini kwahola eshaweni ikhanda lokukhokha term?
A: 30% TT idiphozi ngaphambi kokukhiqizwa, 70% ikhokhwe ngaphambi kokubeletha.
Q: Ungakwazi yini ukukhiqiza imikhiqizo yethu design?
A: Impela, umklamo wakho uyatholakala ukuthuthuka uma uthola amasampula futhi
Q: Kuthiwani ngesikhathi sakho sokulethwa?
A: Kuzothatha izinsuku eziyi-10 kuye kwayi-15 ngemuva kokuthola idiphozi engaphambi kwesikhathi. Isikhathi esithile sokulethwa sincike ezintweni nobuningi be-oda lakho.
Q: Ngaphambi kokuba ngakhe isitimela sami sezitebhisi, ngifuna ukwazi ukuthi iluphi uhlobo lokuthuka okungcono, ukubhuqa kwensimbi engagqwali noma ukubiya kwe-aluminium?
A: Insimbi engenasici yinto ekhethwayo ngokuthuka ngoba ikhombisa amandla aphezulu nokuqina uma kuqhathaniswa ne-aluminium. Ukukhuluma ngobuhle, insimbi inikeza izinzuzo ezicacile. Ngenxa yobuntofontofo bayo, i-aluminium ijwayele ukuklwebheka nokufohla, okwenza kube nzima ukuyihlanza nokuyigcina.
Umbuzo: Ngithole kwesinye isikhathi amanzi efafazwa ngemicu yepayipi ngemuva kwekhanda leshawa. Kwenzekeni?
IMP: Inkinga ukuthi uphawu aluqinile ngokwanele.Vula ikhanda lakho leshawa kusuka epayipini lokuxhuma uphinde ufake iteyipu ye-plumber, eyaziwa nangokuthi i-teflon tape, iye epayipini. Mane nje usebenzise isikrufu ukuqinisa ikhanda lakho lokugeza libuyele epayipini ngemuva kwalokho.